IWM yokuhamba ngeemoto
I-PHV yokugqibela yeDrive
I-MAG yokuhamba ngeemoto
Umzila we-700CK weDrive
I-PCR Swing iimoto
Imoto ye-M2X / M5X ye-Swing
Imoto yeWSM Swing
I-Weitai Hydraulic yenye yezona zinto zihamba phambili kubathengisi be-hydraulic baseTshayina, amashishini okuqala asemanzini asebenza ngokukodwa kumazwe angaphandle. Sizimisele ukubonelela iimveliso hydraulic ezigqwesileyo kunye neenkonzo kumashishini nakubasebenzisi bokugqibela kwihlabathi liphela.
Ekuqaleni, singumzi-mveliso we-OEM, kwaye ngokuthe ngcembe saba yinkampani ebanzi yokudibanisa imveliso, urhwebo notyalo-mali. Motors hydraulic yenye yeemveliso zethu eziphambili. Ukongeza kwimizi mveliso yethu yokubamba ngesanti kubunzulu baphantsi, singumnini zabelo kumgangatho ophezulu weemveliso zeemoto ezihamba ngesanti kubunzulu baphantsi. Iifektri zethu zonke ziqinisekisiwe nge-ISO kwaye abanikezeli ngeempahla banazo zonke izatifikethi ze-CE, zeRoHS, zeCSA kunye ne-UL. Singayila kwaye senze ngokokuzoba ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabathengi.
Iimveliso zeMoto zibandakanya kodwa azikhawulelwanga kwii-Motors zokuhamba, ii-swing motors kunye nee-motor-motor. Iimoto zethu zinobume bokuyila obuphambili kwaye zibonelela ngokusebenza okuphezulu kwevolumu, ukomelela okuphezulu kunye nozinzo olulunge ngakumbi kuneemoto zethu zokhuphiswano. Oku kukhokelele kwimfuno nakwimveliso yeemoto ezihamba ngaphezulu kwe-40,000 Weitai ngo-2019. Iimoto zokuhamba zeWeitai ngoku zibandakanyiwe kwimigca yemveliso yabenzi bezinto zokumba ezifana neSANY, XCMG kunye ne-SDLG.
Njengenkampani kaNobhala we-Shandong Hydraulic Association's (SDHA) kunye neqonga lokuthumela kwelinye ilizwe lombutho we-hydraulic, u-Weitai unebhongo lokumela i-China kunye nokwabelana ngeemveliso zethu ezikumgangatho ophezulu we-hydraulic kwihlabathi. I-Weitai Hydraulic sele inyuliwe ukuba ibe liShishini eliQhelekileyo loNyaka le-2018 kwiNkomfa yoNyaka kunye neQonga lokuThengisa eliBukhali loMbutho weMveliso ye-Shandong, kwaye sizama ukwakha rhoqo kule mpumelelo.
ISIQHUBA SOKUGQIBELA SE-WEITAI